Dhibaatada Coronavirus ee Madaarka Istanbul! Tirada Rakaabka Rakaaray 99,3 Boqolkiiba | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDhibaatada Coronavirus ee Madaarka Istanbul! Tirada Rakaabka Roogta ah ayaa hoos u dhacay boqolkiiba 99,3
11 / 05 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Gegada dayuuradaha ee Istanbul, tirada rakaabkii ku jiray dhibaatada coronavirus ayaa yaraaday
Xayiraadaha safarka ayaa lagu soo rogay adduunka oo dhan sababtoo ah dillaaca cudurka corona. Sababtaas awgeed, tirada rakaabka ee garoonka diyaaradaha Istanbul waxay hoos ugu dhacday boqolkiiba 99,3.
Maamulka Duulista Hawada ee Gobolka (DHMI) ayaa siidaysay tirakoobkeeda diyaaradaha ee bisha Abriil. Markaa, burburka sababay dillaaca Covid-19 ee warshadaha diyaaradaha ayaa sidoo kale lagu muujiyey xogta.
Sida uu sheegayo warkan Ozan Gündoğdu ee ka socda Birgün; Tirada diyaaradaha duullimaadyada diyaaradaha ee ku yaal guud ahaan dalka Turkiga bishii Janaayo, halka 110 681 ay ahayd bishii Maarso Si kastaba ha ahaate sirta 74'y ilaa 347 kun iyo 7 307 bishii Abriil ayaa hoos u dhacday. Sidaa darteed, tirada duulimaadyada garoonka diyaaradaha ayaa hoos u dhacay boqolkiiba 93,3 bishii Abriil marka loo eego bishii XNUMXaad. Intaa waxaa dheer, inta badan diyaaradaha degida waa diyaarad xamuul. Sidaa darteed, hoos u dhaca tirada rakaabka ayaa ka badan.
Laga bilaabo bishii Janaayo iyadoo la adeegsanayo gegooyinka diyaaradaha ee dalka Turkiga waxaa jiray 13 milyan 936 kun 706 rakaab ah. Tiradan ayaa hoos ugu dhacday 7 milyan 347 kun 994 ilaa bishii Maarso. Bishii Abriil, tirada rakaabku waxay hoos ugu dhacday 83 kun 470. Sidaa darteed, Turkiga marka la barbar dhigo bishii Janaayo, tirada rakaabka adeegsanaya gegooyinka diyaaradaha guud ahaan waxay hoos ugu dhacday boqolkiiba 99,4 bishii Abriil.
diyaaradda guud iyo tirada rakaabka ee Turkey
Janawari: 10 kun 681
13 milyan 936 kun 706
Febraayo: 101 kun 915
12 milyan 269 kun 610
Maarso: 74 kun 347
7 milyan 347 kun 994
Abriil: 7 kun 307
83 kun 470
WAA MAXAY MADAXWEYNAHA AIRPORT?
Rakaabka saaran ajandaha damaanadda madaarka Istanbul (IHL) Xaaladda kama duwana Turkiga. Marka loo eego xogta DHMi, tiradan waxay hoos ugu dhacday 35 kun 89 bishii Maarso gudaha IHL iyadoo loo adeegsaday 19 kun 878 diyaaradood bishii Janaayo.
Bishii Abriil, tirada diyaaradaha isticmaalaya IHL waxay hoos ugu dhacday 1327 kun. Sidaa daraadeed, tirada diyaaradaha isticmaalaya IHL ayaa hoos udhacay 96,2 boqolkiiba bishii Abriil marka la barbar dhigo Janaayo. Si kastaba ha noqotee, maadaama diyaaradaha badankood u adeegsadaan ay yihiin diyaarado ganacsi, yareynta tirada rakaabka ayaa xitaa ka sii darnaan.
Tiradan ayaa hoos ugu dhacday 5 milyan 276 kun bishii Maarso, markii saamaynta faafa laga arkay IHL, oo ​​ay isticmaaleen 2 milyan 364 kun oo rakaab ah bishii Janaayo. Bishii Abriil, taraafikada rakaabka ayaa sida caadiga ah loo joojiyay sidii la filaayay oo keliya 33 482 rakaab ah ayaa adeegsaday IHL duullimaadyada daadgureynta awgood. Sidaa daraadeed, tirada rakaabka isticmaalaya IHL ayaa hoos udhacay 99,3 boqolkiiba bishii Abriil marka loo eego Janaayo.
WAA MAXAY CAYMISKA XAALADAHA DILAYAASHA?
Sida wadooyinka waaweyn iyo buundooyinka, waxaa jira dammaanado rakaab oo lagu hayo garoomada diyaaradaha oo ay dhisto waaxda ganacsiga gaarka loo leeyahay isla markaana ay maamulaan waaxda ganacsiga gaarka loo leeyahay. Gegada Diyaaradaha Istanbul ayaa ka mid ah diyaaradaha rakaabka damaanad ka ah. Intaas waxaa sii dheer, qiimaha dammaanadda ayaa laga diiwaangeliyaa heshiiska qoraalka ah ee ka sarreeya euro. Lacagta khidmada rakaabka ee garoonka diyaaradaha Istanbul; Rakaabka caalamiga ah ee taga 20, rakaabka wareejinta 5 iyo rakaabka gudaha 3 waxaa lagu xukumay euro. Si kastaba ha noqotee, dawladdu waxay damaanad qaadeysaa tiro badan oo rakaab ah sanad walba. Dammaanad qaadka sanadkaan ayaa loo dejiyay 333,8 milyan oo Yuuro. Haddii ay dhacdo in dakhliga maddaarka ka hooseeya qaddarkan, gobolkani wuxuu ballanqaaday inuu dhammaystiro dakhliyada isagoo bixinaya lacago dheeraad ah. Damaanada guud ee 13 sano waa 6,3 bilyan euro.
Tirakoobka rakaabka garoonka diyaaradaha ee Istanbul
IGA WAA INUU KU SAABSAN YAHAY GUUD EE IHL
Xogta jirta, waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn IHL inaysan waxyeeleyn. Bixinta dammaanadku xitaa kuma filna in lagu dul saaro deynta shirkadda. Marka maxaa loo sameeyay maalgelin noocan oo kale ah?
Waxaa jira 3 warbixinood oo sameeya falanqaynta halista garoonka 2aad. Midda ugu horreysa waa warbixinta Ururka Dhaqaalaha iyo Siyaasadda Dibadda ee Cilmi Baadhista (EDAM), "Falanqaynta saameynta dhaqaalaha ee garoonka diyaaradaha 2016aad" oo ku taariikhaysan Sebtember 3. Midda kale waa maqaalka Xarunta Dhaqaalaha iyo Cilmi-baarista ee Jaamacadda Bahçeşehir (BETAM), masiirka garoonka diyaaradaha Mega ee ku taariikhaysan Juun 2013 wuxuu ku xiran yahay koritaanka. Qorayaasha maqaalka waa Seyfettin Gürsel iyo Tuba Toru Delibaşı.
KA SOO DHAWAADA DHAQANKA SCENARIO 10 boqolkiiba
Sida ku xusan xaaladda rajo xumada leh ee warbixinta EDAM, Maddaarka Istanbul waxay qaadi doontaa 2019 milyan 75 kun oo rakaab ah sannadka 394, marka loo eego isla muuqaalkaas rajo-galka ah, tiradan waxay kordhin doontaa 2020 milyan 80 kun oo rakaab ah sannadka 163. Si kastaba ha noqotee, sanadka 2019, 68 milyan 650 kun oo rakaab ah ayaa adeegsaday Atatürk iyo garoonka diyaaradaha Istanbul. Xitaa xaaladdii foosha xumayd ayaa lagu la’yahay 7 milyan oo rakaab ah. Xaaladda liidashada leh ee isla isla warbixinta ee 2020 waa 80 milyan 163 kun. Si kastaba ha noqotee, tirada rakaabka ee adeegsanaya saddex-meelood meel sanadka ayaa weli ku xaddidan 12 milyan 277 kun. Kala badh seenyada rajo xumada lama gaari karo sanadkan.
Way iska cadahay ilaa 2013 inay dhaawacayso
Dhanka kale, 2 xaalado ayaa lagu sawirayaa falanqaynta BETAM. Falanqaynta, waxaa la ogaadey sanadkii 2 in labada muuqaal la dhaawacay. Sida ku xusan qodobka, jawiga rajo wanaagsanaanta, khasaaraha wadarta ah ee sanadka 2013 wuxuu gaarayaa 2030 bilyan yuuro halka khasaaraha ka dhasha xaaladuna uu sii kordhayo ilaa 5,7 bilyan yuuro. Si kastaba ha noqotee, isla qodobka, xooga ayaa la saaray: "Qiyaasta dakhligan iyo qiyaasta kharashka waxaa la sameeyaa iyada oo aan tixgelinaynin dakhliga aan shaqeynaynin (dakhliga ka imanaya isticmaalka kala duwan ee dhulka loo qoondeeyay)". Si kale haddii loo dhigo, waxyeelada garoonka diyaaradaha waxay kuxirantahay isticmaalka dhulka. Marka waa maxay cabirka dhulka ee IHL?
LUUQADU WAA AAD PASTE AIRPORT
Baaxadda dhulka loo qoondeeyay IHL waa 7400 hektar. Cabbirkan, IHL wuxuu leeyahay mid ka mid ah dhulalka ugu waaweyn adduunka. In ka badan 1178 jeer cabirka dhulka ee garoonka diyaaradaha ee Ataturk (6 hektar). Intaa waxaa dheer, dhulka Atlanta, oo ah garoonka diyaaradaha ugu weyn marka loo eego awoodda qaada adduunka, waxay xadidan tahay 1625 hektar. Dhulkan weyn ee loo qoondeeyay IHL ayaa ah xalka kaliya ee ururka 'İGA consortium' si looga takhaluso burburka. Xaqiiq ahaan, warbixinta BETAM waxay leedahay "iyada oo loo maleynayo kobaca hooseeya, garoonka diyaaradaha cusub inay heli doonaan dakhli badan oo aan shaqeyneynin 25-ka sano si ay macquul ugu noqoto faa'iido," waxaana lagu nuuxnuuxsaday in kuwani ay yihiin dhulalka waaweyn.
Tirada Dadka Isticmaalaya Gaadiidka Dadweynaha ee Mersin Waxaa hoos u dhacay 50 Boqolkiiba
6 Miisaaniyadda Caadiga ah ee Casriga ah ee Istanbul
Tirada Shaqaalaha ee TCDD 15 Heerka 3 wuxuu hoos u dhacay 2
'50' dhibaatada Alanya Teleferik
Xaaladda '50' ee Alanya Teleferik
Gaadiidka Isgaadhsiinta Toddobaadlaha ee Usbuucii Tirada Usocodka 1.6 Boqolkiiba
Sakarya Nostalgic Tram waa Bid Again
Shilalka asfaafka ah ee aan la marin ayaa yaraynaya boqolkiiba 50
405 rakaabkii rakaabka ee garoonka diyaaradaha ee Istanbul